महादेवलाई ५ पवित्र वस्तु चढाउँदा किन पाप लाग्छ ? – ejhajhalko.com
महादेवलाई ५ पवित्र वस्तु चढाउँदा किन पाप लाग्छ ?
२७ माघ २०७४, शनिबार १४:११ 271 पटक हेरिएको
तथापी शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन ।
तर, ब्रह्माले ढाँटेको भनेर शिवजीले थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने उक्त ज्योतिर्लिङ्ग अनन्तसम्म फैलिएको थियो। ब्रह्मा र गोलाईँती फूलको त्यो झूटबाट क्रोधित शिवजीले ब्रह्माको एउटा टाउको काटिदिनुभयो र कसैले पनि उनलाई भगवान भनेर पुजा नगरून् भनेर ब्रह्मादेवलाई श्राप दिनुभयो।
त्यसपछि, शिवजीले गोलाईँती फूलतर्फ फर्केर उनको पुजा गर्दा कहिल्यै पनि सो फूल प्रयोग गर्न नपाऊन् भनेर श्राप दिनुभयो।
तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख१ जालन्धर र महादेवको युद्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लुट्न गए। जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लुट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भष्म बनाइदिएका थिए।आफ्नो पतिको मृत्यु र आफूप्रतिको धोकाबाट क्रोधित तुलसीले महादेवलाई आफ्नो पवित्र पातले कहिल्यै पनि पुजा गर्न नपरोस् भनेर श्राप दिन्छिन्। त्यसैले गर्दा नै शिवजीलाई तुलसीको पात चढाउनुहुँदैन भनेर शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्।
तर, शवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। यस्तो शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।